Umnotho kanye nomthelela wabenzeli bezomnotho emakethe | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Umnotho jikelele
Babizwa ngamagama abasebenza kwezomnotho kulabo balingisi abangenelela emnothweni, abaneqhaza elithile kanye nesenzo ohlelweni lwalolu hlobo, ngaphansi kwemithetho ethile. Bazoba ngabantu noma izikhungo ezizobe zithatha izinqumo kulo mongo.
Ngencazelo yalawa ma-ejenti, umdlalo wezomnotho uhlanganisiwe, futhi kungenzeka ukwenza lula izinqubo ezenzeka kule ndawo., okuholele ekuhlaziyweni okulula nokuvumela incazelo yokusebenza kwayo.
Umenzeli wezomnotho angathathwa njenganoma yimuphi umuntu osemthethweni noma wemvelo osebenzisa ngokuzimela uhlobo oluthile lomsebenzi wezomnotho emakethe. Lawo mabhizinisi enza imisebenzi yezomnotho eyahlukahlukene angafakwa, kungakhathalekile ukuthi asezingeni elingakanani ngokomthetho noma anezimali ezinjani.
Kuyenzeka-ke ukuthi uqondwe njenge-ejenti yezomnotho, labo abavumelana nokucutshungulwa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwempahla nezinsizakalo; ngezivumelwano, amalungiselelo kanye nezivumelwano okuvunyelwene ngazo, ngaleyo ndlela kube nomthelela emsebenzini wabo ezimakethe futhi kudlulela umnotho woMbuso ngenzuzo noma inzuzo yezohwebo abaphethe ukuyithola.
Sonke singabasebenzeli bezomnotho ngoba sonke ngandlela thile senza umsebenzi wezomnotho, sisebenzisa izimpahla noma izinsizakalo futhi senza izinkokhelo zalokhu ngenzuzo esiyitholile kolunye uhlobo lomenzeli.
Ngokukhokhela lezi zimpahla nezinsizakalo, sizobe sithuthukisa ukukhiqizwa kwamanye ama-ejenti.
1 Kunezinhlaka ezintathu ezinkulu zezomnotho ngaphakathi komnotho ovaliwe.
2 Ama-ejenti wezomnotho kanye nezici zawo
3 Ubudlelwano phakathi kwabasebenzela ezomnotho
Kunezinhlaka ezintathu ezinkulu zezomnotho ngaphakathi komnotho ovaliwe.
Abathengi (imindeni), abakhiqizi (Ibhizinisi) nomlawuli wezimakethe (isimo). Konke kunendima ehlukanisiwe nebalulekile, ukusungula ubudlelwano obuseduze phakathi kwabo ngokwesisekelo.
Imisebenzi eyahlukahlukene yezomnotho izohambisana futhi ngaleyo ndlela incike komunye nomunye.
Umndeni, ngaphezu kokudla, kungaba ngamalungu ayo abamba iqhaza emsebenzini wokukhiqiza wenkampani, inkampani yabathengi nayo isendimeni yayo njengomthengi wokufaka. Uhulumeni angadlala indima yomthengi nomkhiqizi ngasikhathi sinye ezimeni ezithile.
Abasebenzi bezomnotho bazobe bekhiqiza ingcebo enamandla okuzuzisa bonke abalingisi.
Lapho ngalinye lala ma-ejenti likwazi ukufeza izindima zalo ngaphansi kobudlelwano obukhona phakathi kwabo, kungenzeka ukuthi umnotho usebenze ngokugculisayo, wenze umnikelo omuhle futhi ohlangene emphakathini okulindelekile.
Uma, kunalokho, lawa ma-ejenti engasebenzi kahle, futhi ngenxa yokuncika kwawo, umthelela wayo omubi kwamanye ama-ejenti ungathikameza umnotho jikelele.
Ama-ejenti wezomnotho kanye nezici zawo
Imindeni ibhekwa njengezikhungo zezomnotho eziphethe ukusetshenziswa, ichazwa njengabantu abaningi ababelana ngokuhlalisana ndawonye.
Ngomqondo wezomnotho nangombono ocatshangelwe kulolu daba, umndeni ungaba nelungu elilodwa noma amaningi awo, kungakhathalekile ukuthi ahlobene yini.
Umndeni uzoba yi-ejenti yezomnotho ngokuzinikela okukhulu ekusetshenzisweni, futhi ngasikhathi sinye kuzoba ngumnikazi wezinsizakusebenza zokukhiqiza, unikeze umsebenzi.
Isici sezifunda ezinentuthuko encane, umndeni ungazijwayeza ukuzisebenzisa. Bazobe bekhiqiza lokho abazokusebenzisa kamuva.
Imindeni ihlukanisa imali engenayo ekukhokheni intela, ukonga nokusetshenziswa; ukwenza indima yokuba ngumnini wezinto ezikhiqizayo. Yize kungabathengi ngokugqwesa, bazobe benikela ngezici zokukhiqiza ngohlobo lomsebenzi cishe njalo.
Imindeni njengamaqembu, noma abantu ngabanye ababamba iqhaza emnothweni wesizwe, Yibo abazoba namaphesenti amakhulu kakhulu ezinsizakusebenza ezidingwa izinkampani ekusebenzeni kwazo., futhi kungabhekwa njengamayunithi ayisisekelo okusetshenziswa.
Lona yi-ejenti yezomnotho, ngokususelwa kubhajethi elinganiselwe kanye nezinto ezifana nokuncamelayo nezinto abazithandayo, izobe ifuna ukwaneliseka kwezidingo zayo ngokusebenzisa izinsizakalo nemikhiqizo.
Lawa angama-ejenti aphethe ukukhiqiza izimpahla nezinsizakalo ngezinto zokukhiqiza ezinikezwa yimindeni.
Ukushintshanisa lezi zinto zokukhiqiza, kumele ngabe bakhokha imindeni ngokushintshana ngomsebenzi, amaholo; ngokushintshaniswa kwemali, izabelo nenzalo; noma izintela zomhlaba.
Lapho izimpahla nezinsizakalo zikhiqizwa, zinikezwa imindeni, uHulumeni noma ezinye izinkampani okufanele zisetshenziswe.
Izinkampani zingaba ezizimele, ezomphakathi noma ezokuzithandela. Bacatshangelwa ukuthi bafuna ukusetshenziswa okukhulu kakhulu nenzuzo abangayizuza.
Zingabekwa njengamayunithi ayisisekelo okukhiqiza, Inhloso yakhe noma indima yakhe eyinhloko ukukhiqiza izimpahla nezinsizakalo ezizohlose ukuthola inzuzo enkulu kakhulu, kucatshangelwa imikhawulo kokubili ubuchwepheshe kanye nesabelomali.
Kuzoba mqoka ukukwazi ukwenza lo msebenzi, ube nenani elithile lezinsizakusebenza nezinto ezikhiqizayo, ezingathengwa noma zinikezwe izinkontileka emakhaya.
Ngokuyinhloko kunezici ezintathu zokukhiqiza ezicatshangwayo. Usonhlamvukazi-ngokomzimba, lapho kufakwa khona izinsiza kusebenza, imishini, njll., kanye ezezimali-inhlokodolobha, equkethe izikweletu nemali. Owesibili kwalaba umhlaba, ukuvumelanisa nezinto zokusetshenziswa nemithombo yemvelo futhi okokugcina, umsebenzi womuntu, okhona kokubili umsebenzi wobuhlakani nowomzimba.
Izinsizakusebenza ezikhiqizwayo zibizwa ngokuthi (okokufaka) - okokufaka, kanye (nemiphumela) - okukhishwayo, ngenxa yalokho kumasevisi nezimpahla ezitholiwe. Izinkampani zingathathwa njengohlelo oluvumela ukuguqulwa kokungenayo kube yimiphumela, kusetshenziswa ubuchwepheshe obuthile balokhu.
Ubuchwepheshe bungachazwa njengokusetshenziswa noma ukusetshenziswa kokhonkolo kolwazi lwesayensi, oluzodala inhlanganisela yokokufaka okuhlukile noma izinto ezikhiqizayo ukuze kutholakale umkhiqizo othile. Esimweni ngasinye somlando, kuzokwenzeka ukuthi kube nezindlela ezithile zobuchwepheshe zokwenziwa kwempahla.
Yenziwe iqoqo lezikhungo zomphakathi zesizwe. Ngaphandle kokunikeza nokufuna izimpahla nezinsizakalo ngasikhathi sinye, iqoqa intela ezinkampanini nasemindenini ebekelwe ukuphatha umsebenzi wayo.
Banokungenelela okuhlukahlukene kwezomnotho; Izonikela futhi ifune izimpahla, izinsizakalo nezinto zokukhiqiza, ngasikhathi sinye izoqoqa intela ezokwaba kabusha ukwenza imisebenzi ehlukahlukene.
Ezinye zezenzo zalo ezifanele kuzoba ukuhlinzeka izwe ngezinsizakalo zomphakathi nezimpahla (amanyuvesi, imigwaqo emikhulu, njll.), Izinkampani ezixhasayo nemindeni enezidingo ezinkulu kakhulu; futhi nokuphatha izikhungo zabo.
Izobamba iqhaza lomhlinzeki kanye nokwehlisa izinto zokukhiqiza emakethe.
Ngokufingqa, kungenzeka ukusho lokho umbuso uzolawula imisebenzi yezomnotho ngezinga elikhulu, ukuhlinzeka ngohlaka lwezomthetho lokuthi abenzeli basebenze.
Kuzoba ngumnikazi wengxenye yezinto ezikhiqizayo njengezinto zokusetshenziswa, inhlokodolobha nezinsizakusebenza zemvelo. Izonikeza umphakathi ingqalasizinda eyanele, iqinisekise ukuthi imisebenzi yezomnotho ingenziwa ngaphansi kwezimo ezanele.
Kuzoba yilowo ohlinzeka ngezinsizakalo nezimpahla zomphakathi njengemfundo, ubulungiswa noma impilo. Izosebenzisa inqubomgomo yezezimali ukwaba kabusha imali engenayo, ukunikela intela eqoqiwe kumxhaso omncane wamaholo, imihlomulo yokungasebenzi, njll.
Ubudlelwano phakathi kwabasebenzela ezomnotho
Ama-ejenti wezomnotho ahlobene komunye nomunye futhi adlula ngokwenana ngempahla nezinsizakalo.
Kule nqubo imisebenzi yezomnotho Zizohlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili eziyisisekelo; leyo yemisebenzi yokusetshenziswa neyokukhiqiza.
Imisebenzi yabathengi izokwenziwa yimindeni lapho iqhubeka nokuthenga izimpahla nezinsizakalo. Ngalo mqondo ngakho-ke ngeke zisetshenziselwe ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwamanye amasevisi noma izimpahla, noma ukumakethwa ngentengo ephezulu. Ifenisha yendlu, ukudla, okokugqoka njll kungathathwa njengezibonelo ezithile.
Imisebenzi yokukhiqiza yenziwa nguHulumeni nezinkampani. Bathenga izimpahla nezinsizakalo ezinkampanini ezizimele noma zomphakathi, bazisebenzisela ukukhiqiza ezinye izinhlobo zezimpahla noma imikhiqizo nayo engathengiswa ekugcineni.
Okushiwo efektri yezimoto kuyisibonelo, lapho izimpahla kungaba injini yemoto, iminyango, njll., Lezi zizosetshenziswa kumkhiqizo ophelile njenge "izimpahla eziphakathi", noma njengemikhiqizo ezomakethwa ngokuhamba kwesikhathi ngaphandle kokwenziwa ukwahluka., njengoba batholwa besebenza njengezingxenye zokungasebenzi.
UMbuso kanye nezinkampani nazo zingase zithole izimpahla ezinkulu, imikhiqizo engasetshenziselwa ukukhiqiza ezinye izimpahla nezinsizakalo, ngaphandle kokuba zona zisetshenziswe ekugcineni, futhi ngeke zibe yingxenye yomkhiqizo ophelile.
Umnotho usekelwa ukutadisha ama-ejenti ezomnotho, ngokugomela ukuthi bacabanga noma bahlonipha umgomo wokuba nengqondoKukhona uchungechunge lwezinhloso ezichaziwe lapho izinqumo zizobhekisa khona, kubhekwe imikhawulo ezobeka ukuntuleka kwezinhlobo zezinsizakusebenza ezitholakalayo.
Izidingo zomuntu ozozama ukwanelisa imisebenzi ehlukene yezomnotho zizohlangana nezinsiza ezilinganiselwe hhayi ezimeni ezimbalwa okunzima ukuzizuza. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani Izakhiwo eziningiliziwe zamaqembu abamba iqhaza kule nqubo zidinga ukuchazwa. Ukuzifunda nokuziqonda kuzobaluleka empumelelweni yezomnotho.
Ukuziphatha kwalawa ma-ejenti kuzohlala kuyiphuzu elibalulekile kwezomnotho, Kungakho ukuqagela okukhona ngokwazi ngokujulile indlela la ma-ejenti aqhubeka ngayo emvelweni wempilo yezomnotho yesifunda nasekuthuthukiseni ukukhiqizwa, ukusatshalaliswa nokusetshenziswa kwezinsizakalo nemikhiqizo ejikelezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Abasebenzi bezomnotho